EU-da oo qaadeysa tallaabo ka dhan ah AMISOM | shumis.net
Home » News » EU-da oo qaadeysa tallaabo ka dhan ah AMISOM
EU-da oo qaadeysa tallaabo ka dhan ah AMISOM
Warbixin kasoo baxday Ururka Midowga Europe, ayaa waxaa lagu difaacay go’aanka lagu sameeyay mushaar dhimista Ciidamada AMISOM.
Warbixinta oo laga soo saaray Xafiiska Ururka Midowga Europe ee Somalia ee uu Danjiraha ka yahay Michele Chevvone taasi oo lagu sheegay mid saxan in qiima dhimis lagu sameeyo miisaaniyada la siin jirey Hawlgalka AMISOM 20%.
Michele Chevvone oo difaacaaya go’aankaasi ayaa sheegay in AMISOM ay qiima dhimistaasi ku wargaliyeen muddo hadda laga joogo sanad waxa uuna cadeeyay in go’aankaasi uusan aheyn mid si degdeg ah lagu gaaray.
Michele Chevvone, waxa uu sheegay in Ururka Midowga Africa ay in muddo ah soo daadihiyeen balse iminka ay u muuqato inay jiraan duruufo taagan oo bedel u baahan.
Michele Chevvone, waxa uu ku dooday in EU-da ay sanad waliba bixin jirtay dhaqaale dhan 200 million oo Dollar, balse waxa uu tilmaamay in miisaaniyadaasi ay iminka hoos u dhacday.
Michele Chevvone, waxa uu ku dooday in dhimista 20%, ay go’aansadeen bilowday bishii Janaayo ee sannadkan, isaga oo intaa raaciyay in go’aankaasi uu yahay mid laga mideysan yahay oo aan cid gaar ah khuseyn.
La dagaalanka Al-shabaab ayuu sheegay inay mas’uuliyad ka saaran tahay Africa oo idil, isaga oo si gaar ah dusha uga saaray Ciidamada Dowlada iyo Dowladaha ay Ciidamada ka joogan Somalia.
Dhanka kale, Mr Michele Chevvone, ayaa ku taliyay in caqabadaha taagan aan looga gaabin la dagaalanka Al-shabaab.
Title: EU-da oo qaadeysa tallaabo ka dhan ah AMISOM
Posted by galmada Net, Published at April 27, 2016 and have 0 comments